🥇Ezona platforms zoRhwebo lweDemo ngoJanuwari 2022 | Funda ngokupheleleyo isiKhokelo soRhwebo esi-2!
IiPlatifomu zokuRhweba ngeDemo ngo-2021
Ukuzinika elona thuba lihle lempumelelo xa uthengisa nayiphi na i-asethi, luluvo oluhle ukuziqhelanisa.
Ukuba oku kuvakala ngathi yinto onokuba nomdla kuyo - funda.
Kwesi sikhokelo, sihlaziya i eyona ndawo ilungileyo yokurhweba ngedemo ngo-2021. Siphinde sithethe ngeenzuzo zolu hlobo lwe-akhawunti kwaye sinikezela ngeengcebiso ezimbalwa, ukugqiba ngesinyathelo-nge-nyathelo lokuhamba ukuze uqalise namhlanje!
IiPlatifomu zokuRhweba ngeDemo ngo-2021-Uphononongo olupheleleyo
Masiqale ngokuphonononga awona maqonga entengiso edemo ngo-2021. Ukukhetha umthengisi ofanelekileyo we-intanethi womsebenzi kubaluleke kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, amathuba akhoyo, uya kusebenzisa iqonga elifanayo ngenye imini ukurhweba ngenkunzi yakho yokwenyani.
Unale nto engqondweni, ngezantsi uya kufumana ukhetho lwezona ndawo zibalaseleyo zokurhweba ngedemo kwimarike ngoku.
I-AvaTrade yenye i-CFD broker kuluhlu lwethu olungaqhelekanga ekuboneleleni ngenkonzo kubarhwebi kwinqanaba lehlabathi. Ukuqala urhwebo lwe-forex, uya kuba neeperi zemali ezingaphezu kwama-60 onokukhetha kuzo - ezibandakanya izibini ezinkulu, ezincinci kunye nezingaqhelekanga. Ezinye izibini zeFX ezikhoyo kwiAvaTrade ziquka iCHF/JPY, EUR/USD, GPB/JPY, NZD/USD, GBP/USD, CAD/JPY, GBP/SEC, NZD/CHF, USD/NOK, USD/RUB, EUR /PLN kunye nezinye ezininzi.
Ukusabalala kule mboleko ye-forex ngokuqhelekileyo kukhuphisana. Esi sikhokelo sifumene ezinye ii-asethi zokubandakanya ii-ETF, iimpahla, iibhondi, ii-cryptocurrencies, i-stocks, kunye ne-indices. Awuyi kuhlawula nayiphi na ikhomishini yokungena okanye ukuphuma kwiimarike e-AvaTrade. Ngaphaya koko, ummiselo uvela kwimimandla emithandathu ukuze ukwazi ukurhweba kwiimeko zokhuseleko kunye nolunye uhlobo lokhuseleko olukhoyo. Ukuba ungathanda ukuqalisa urhwebo lwe-forex usebenzisa indawo yedemo yasimahla ngaphambi kokuya kwiimarike eziphilayo-i-AvaTrade idityaniswe neMT4.
Njengoko besitshilo, unokukhuphela iqonga leqela lesithathu ukuze uzuze kwiimfumba zezixhobo kunye nokhetho lokurhweba oluzenzekelayo. Sikwafumene ii-apps zomthengisi i-AvaTradeGO kunye ne-AvaSocial zibe luncedo. Le yokugqibela ikuvumela ukuba 'ulandele', 'ikopi', kwaye 'uthande' abanye abarhwebi bemali. Le yindlela eluncedo yokufumana ingqiqo kwimarike ye-forex - kubantu abanamava.
I-AvaTradeGO ibandakanya iitshathi, izixhobo zokulawula, amaxabiso aphilayo, kunye nokukwazi ukulawula ii-akhawunti zakho zeMT4 kuzo zombini idemo kunye nemo yokwenyani. Unokuqala urhwebo lwe-forex ngokwenza idiphozithi encinci ye-100 yeedola enye yeenketho ezininzi zentlawulo. Oku kubandakanya amakhadi okuthenga ngetyala kunye nedebit, ukudluliselwa kwebhanki, kunye ne-e-wallets njengeNeteller, iWebMoney, kunye neSkrill.
Ubuncinci bediphozithi ukuqala ukurhweba kwangaphambili nge-100 nje ye- $
Ilawulwa kwiindawo ezi-6, kuquka i-Australia, uMzantsi Afrika, iJapan, kunye ne-EU
I-0% ikhomishini yokuthengisa i-forex
Imali yomlawuli ihlawuliswe emva kweenyanga ezili-12 akukho msebenzi weakhawunti
2. I-EightCap-Urhwebo ngaphezulu kwama-500 + eKhomishini yee-Asethi
I-Eightcap yi-MT4 kunye ne-MT5 broker eyaziwayo egunyazisiweyo kwaye ilawulwa yi-ASIC kunye ne-SCB. Uya kufumana ngaphezulu kwe-500+ yeemarike ezimanzi kakhulu kweli qonga - zonke zibonelelwa ngee-CFDs. Oku kuthetha ukuba uya kuba nokufikelela kwi-leverage ecaleni kwesakhono sokuthengisa okufutshane.
Iimarike ezixhaswayo ziquka i-forex, imveliso, i-indices, izabelo, kunye ne-cryptocurrencies. Akukhona nje ukuba i-Eightcap inikezela ngokusasazeka okuphantsi, kodwa i-0% ikhomishini kwii-akhawunti eziqhelekileyo. Ukuba uvula i-akhawunti ekrwada, ngoko unokurhweba ukusuka kwi-0.0 pips. Ubuncinci bediphozithi apha yi-100 yeedola kwaye unokukhetha ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho ngedebhithi okanye ikhadi letyala, i-wallet, okanye ucingo lwebhanki.
Umthengisi olawulayo we-ASIC
Urhwebo ngaphezulu kwama-500 + asethi ngaphandle kwekhomishini
Imida yokunciphisa ixhomekeke kwindawo yakho
Imali yakho eyinkunzi isemngciphekweni welahleko xa uthengisa ii-CFD kweli qonga
3. Capital.com – Best Newbie Friendly Demo Trading Platform
Umboneleli weCFD Capital.com lukhetho olukhulu lweqonga ledemo kuye nabani na omtsha kraca ukurhweba kwi-Intanethi. Iakhawunti yakho yasimahla iya kulayishwa kwangaphambili ngeemali zephepha ezingama-10,000 zeedola. Kukho ngaphezu kwe-3,000 yeemarike ezikhoyo zokurhweba simahla kwi-Capital.com. Oku kubandakanya i-forex, i-indices, i-cryptocurrencies, izabelo, kunye neemveliso. Konke oku kuza kunye nokusasazeka okukhuphisanayo kunye nenketho yokunyusa ukonyusa isikhundla sakho sokurhweba. Ukufikelela kobu buninzi bezixhobo zemali, ungaqhagamshela iakhawunti yakho kwiqonga elikhankanywe ngasentla iMT4.
I-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB ilawula le akhawunti ye-demo ye-akhawunti yokuthengisa iqonga, ngoko akufanele kubekho iinkxalabo malunga nokuba semthethweni okanye ukhuseleko. Ukuba okanye xa uthatha isigqibo sokuthenga kunye nokuthengisa ngesibonelelo sokurhweba esiqhelekileyo, imali yakho iya kugcinwa kwi-akhawunti yebhanki eyahlukileyo. Kwi-Capital.com unokukhetha phakathi kweeakhawunti ezi-1 ezahlukeneyo ezinamacandelo ahlukeneyo kunye neemfuno zokurhweba ngokuphila. Oku kuquka i-'Standard', 'Plus', kunye 'neNkulumbuso' - kwaye izibonelelo ziquka ii-webinars ezikhethekileyo, isaphulelo semali, i-akhawunti ezinikeleyo elawulwayo, kunye nokunye. Xa uziqhelanisa neakhawunti yakho yedemo yokurhweba, unokuthatha ithuba lezixhobo ezikhankanywe ngaphambili.
Usenokufuna ukufakela iplagi ethi 'Guardian Angel'. Oku kukunika impendulo kwiinzame zakho zokurhweba kwaye kubonisa ukuguquguquka kwemarike, uhlahlelo lokubuyisela umva kunye nokufikelela kwiimfumba zeempawu zohlalutyo, izikhombisi, kunye nokunye. Xa ukulungele ukuxhasa iakhawunti yakho, akufanele ube nayo nayiphi na ingxaki yokufumana uhlobo lwentlawulo olukhethayo. Eli qonga lokurhweba ledemo lamkela amakhadi etyala kunye nedebit, ukudluliselwa kwebhanki, kunye ne-e-wallets njengeSkrill kunye neApple Pay. Ubuncinci bediphozithi yi-20 yeedola, efikelelekayo kubathengisi abaninzi be-newbie.
Iyahambelana neMT4 yorhwebo lwedemo lwasimahla
Minumum idiphozithi abaqalayo-friendly $20
Inikwe ilayisenisi ngamaqumrhu alawulayo i-CySEC, i-FCA, i-ASIC, kunye ne-NBRB
I-78.77% yabatyali zimali abathengisayo baphulukana nemali xa bethengisa iiCFD kunye nalo mboneleli
I-LonghornFX liqonga lokurhweba elisebenziseka lula eligubungela uninzi lwe-cryptocurrency kunye neeperi ze-forex. Unako kwakhona ukurhweba stock CFDs kunye indices ezininzi. Uya kuba nakho ukurhweba nge-avareji ukuya kuthi ga kwi-1: 500 eLonghornFX- nokuba ungumthengisi okanye umthengi oyingcali.
Ngokomrhumo, uya kuxhamla kukhuphiswano olusasazekayo kulo lonke usuku lokuthengisa. Emva kwayo yonke loo nto, iLonghornFX ngumrhwebi we-ECN-ke uya kufumana awona maxabiso athengiweyo / athengisayo afumanekayo kolu shishino. IiKhomishini ziya kwahluka ngokuxhomekeka kwi-asethi kodwa ngesixa esixabisa kwi- $ 7 nge-100,000 yeedola ezithengiswayo.
Siyayithanda inyani yokuba iinkqubo zeLonghornFX zenze izicelo zokurhoxa kwangolo suku lunye. Kwaye umthengisi unikezela ngenkxaso epheleleyo yeMT4. Iqonga linokufikeleleka kwi-Intanethi, ngokusebenzisa isoftware yedesktop, okanye ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni.
Umthengisi we-ECN ngokusasazeka okuqinileyo
Ukuphakama okuphezulu kwe-1: 500
Ukurhoxiswa kwemini enye
Iqonga likhetha iidipozithi ze-BTC
Imali yakho eyinkunzi isemngciphekweni xa uthengisa iiCFD kunye nalo mboneleli
Ungazikhetha njani ezona Platform zokuRhweba ngeDemo
Njengoko besitshilo, ukugqiba ukuba yeyiphi idemo iqonga lokurhweba ukubhalisa kunye akufanele kuthathwe lula. Ukuba usafuna ukwenza ingqondo yakho, sidwelise ezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa uphanda ukuba yeyiphi enokulungela.
Nokuba yeyiphi Iimpahla or crypto unomdla wokurhweba usebenzisa iqonga leakhawunti yedemo - bubulumko ukuqinisekisa ukuba umthengisi unokukunika ufikelelo kwiibhaskithi ezahlukeneyo ze-asethi.
Ngokufunda iimarike ezahlukeneyo usebenzisa iakhawunti yakho yedemo yasimahla, iya kukulungiselela ngcono xa ukhetha ukurhweba ngemali yokwenyani. Iimarike ezininzi, ngakumbi izinto zorhwebo kunye nezimbini zemali ezingaqhelekanga, ziyaguquguquka kakhulu. Ngokunjalo, abathengisi abaninzi bakhetha ukugcina ipotfoliyo eyahluka-hlukeneyo yee-asethi, ukuthintela utshintsho oluqatha ngolo hlobo.
Unale nto engqondweni, ezona ndawo zibalaseleyo zokurhweba ngedemo ziya kuba nayo yonke into ukusuka kwi-cryptocurrencies kunye ne-forex ngababini - ukuya kwizitokhwe, iimpahla, ii-indices kunye nee-ETF zokuziqhelanisa.
Sikhankanye ukuma kweqonga lokurhweba kwidemo kulo lonke uphononongo. Oku kungenxa yokuba ummiselo yinto ebaluleke kakhulu xa kuziwa ekukhetheni indawo ekhuselekileyo yokurhweba.
Unokufuna ukunamathela kwi-akhawunti ye-demo yorhwebo ngoku, kodwa mhlawumbi kuya kufika ixesha apho ufuna ukuthenga nokuthengisa usebenzisa imali yokwenene. Kuxa ufuna umthengisi onelayisenisi kwicala lakho ukuze enze iiodolo kwaye ugcine inkunzi yakho ikhuselekile kubaphuli mthetho.
I-eToro umzekelo, ilawulwa yi-CySEC, i-FCA, kunye ne-ASIC. Ngamnye kule mibutho yezemali inyanzelisa imithetho nemimiselo eyahlukeneyo ukunqanda ukuthutyeleziswa kwemali kunye nezenzo ezimbi ezivela kubarhwebi be-intanethi. Oku kubandakanya i-KYC, ukugcina iimali zakho kwi-akhawunti eyahlukileyo kunye nokungenisa uphicotho lwamaxesha ngamaxesha.
I-Platform ekulula ukuyisebenzisa
Ngelixa kuvakala njengenqaku elicacileyo, ngaphambi kokuba ubhalisele indawo yokurhweba yasimahla, kufuneka uqinisekise ukuba iwebhusayithi ifanelekile kwinqanaba lakho lamava. Ngokuqinisekileyo, ungasebenzisa iakhawunti yedemo yasimahla ukujonga oku, kodwa kungcono ukuqala ngewebhusayithi yokujonga ngokulula ukuqala.
Ezinye zezona ndawo zintsha zokurhweba kwidemo yobuhlobo kwindawo ziquka i-eToro kunye ne-Capital.com. Zombini zenza ukufumana i-asethi oyikhethileyo kunye nokubeka ii-odolo lula - kunye, ungatshintshela kwi-akhawunti yokuthengisa yokwenyani nanini na xa uthanda.
Nangona uya kufikelela kwiimarike usebenzisa iakhawunti yokuziqhelanisa, kusebalulekile ukuqiniseka ukuba umthengisi unikezela ngeentlawulo eziphantsi.
Ezinye zezona ntlawulo ziqhelekileyo zihlawuliswa ngabathengisi be-intanethi ziquka:
Imirhumo yeKhomishini: Imirhumo yeKhomishini iza kuzo zonke iimilo kunye nobukhulu kwaye ixhomekeke ngokupheleleyo kwi-demo yokuthengisa iqonga obhalisa ngalo. Ewe, awuzukuhlawuliswa ikhomishini kwi-akhawunti ebuhlungu yephepha. Nangona kunjalo, xa ufudukela kwenye yokwenyani, khumbula iireyithi zekhomishini ezimiselweyo okanye eziguquguqukayo ezihlawuliswa kurhwebo ngalunye (ukungena kunye nokuphuma). Umthengisi okumgangatho ophezulu eToro ubiza i-0% ikhomishini kuzo zonke ii-asethi.
Ukusasazeka: Kwabo bangazi, ukusasazeka kufana nomrhumo omncinci ohlawuliswa ngabathengi. Ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa le-asethi oyithengisayo. Ezinye iiplatifomu zokurhweba ngedemo zibonelela ngokusasazeka ngakumbi kunabanye. Umncinci umsantsa - ngcono kwinzuzo yakho xa usebenzisa ibhalansi yakho yokwenyani yorhwebo ngakumbi ezantsi kumgca.
Iintlawulo zentengiselwano: Abanye abarhwebi be-intanethi bahlawulisa umrhumo wokuthengiselana ngokusebenzisa iindlela ezithile zokuhlawula, ezinje ngedebhithi okanye ikhadi letyala. Xa uqala ukurhweba ngenkunzi yokwenyani eToro uya kuhlawula kuphela i-0.5% kwidiphozithi. Oku kuhlawuliswa kuphela ukuba awuyixhasi iakhawunti yakho ngeedola zaseMelika.
Ngalo lonke ixesha ujonge ukuba yeyiphi imirhumo onokuthi ube noxanduva ngayo xa ulungele ukusuka kwiakhawunti yakho yokurhweba yedemo uye kweyokwenyani.
Izixhobo kunye neempawu
Ngelixa ezinye iiplatifomu zokurhweba ngedemo zinika umva kwiinkonzo ezisisiseko, ezinye zibonelela ngesixhobo ngasinye phantsi kwelanga. Ngamnye kubo, unokonwaba ukufikelela kwiimarike nge-broker yakho kwaye emva koko uphonononge izixhobo zohlalutyo lobugcisa kwenye indawo. Enye into ekufuneka uyiqaphele kukuba abanye ababoneleli basebenzisana neqonga leqela lesithathu elikhankanywe ngasentla iMT4.
Njengoko besitshilo, oku kukunika ithuba lokusebenzisa indawo yakho yokurhweba yedemo ukuthenga nokuthengisa. Kukwathetha ukuba unokufunda i-ins kunye nokuphuma kuhlalutyo lobuchwephesha kwaye uziqhelanise nokuzoba iitshathi zakho kunye nezinto ezinjalo. Into ephawulekayo kwi-demo ye-platform ye-eToro yi-Copy Trader.
Oku kuthetha ukuba awukwazi nje ukuziqhelanisa nemibono yesicwangciso kunye nokufikelela kwiimfumba zeemarike, kodwa unokutyala imali kumrhwebi osele enolwazi kwaye ubonise umsebenzi wabo wokurhweba (ngokuhambelana notyalo-mali lwakho). Oku kunokukunika iingcebiso malunga nendlela yokwenza amaqhinga kwaye leliphi inqanaba lomngcipheko elinokukusebenzela.
Izinto eziluncedo kwiiPlatifomu zokuRhweba ngeDemo
Amaqonga okurhweba ngedemo abonelela ngeemfumba zeenzuzo, zonke esizigubungelayo ngokulandelayo.
Funda ukurhweba simahla
Ukuba ungumfundi opheleleyo kulo mmandla, akukho ndlela ibhetele yokufunda ukurhweba kunokwenza oko ngaphandle kokubeka umngcipheko eyakho imali oyisebenze nzima. Masithi unomdla oqinileyo kwiimarike ze-forex, kodwa awazi ukuba uqale phi.
Ukufunda iincwadi ezithetha ngalo mba xa kuthelekiswa nobunyani bokusebenzisa imali yakho yokwenyani kunokoyikisa ngandlel’ ithile. Ngaloo ndlela, akukho bungozi ekuzameni ngeqonga lokurhweba ledemo oyikhethileyo - njengoko usebenzisa imali yephepha! Unokurhweba ngayo nayiphi na i-asethi, simahla, kwaye ufumanise ukuba yintoni ekusebenzela ngcono kunye neenjongo zakho zokurhweba.
Vavanya iiRobhothi eziziSebenzisayo
Nabani na onomdla wokuthatha indima ye-backseat xa uthengisa, amaninzi amaqonga okurhweba ngedemo aya kuxhasa iirobhothi ezizenzekelayo. Kwabo basebumnyameni, le yisoftware esebenza kwi-algorithms esetwe kwangaphambili. Ubuchwephesha obuntsonkothileyo bunokukhangela iimarike ngamathuba okurhweba kwisiseko se-24/7.
Nje ukuba unike imvume yakho, irobhothi, ekwabizwa ngokuba yi-EA (Umcebisi ngeengcali), iyakwazi ukwenza ukuthenga nokuthengisa iiodolo egameni lakho. Oku kuya kwenziwa ngeqonga leakhawunti yedemo oyikhethileyo.
Okubaluleke kakhulu, le ndawo yendawo yokurhweba ixhaphake kunye nabadlali be-con-artists benza amabango anesibindi okuphumelela okuqinisekisiweyo. Inkonzo phantse isoloko iza nentlawulo enye, enokuba ngamakhulu okanye amawaka eedola. Ngaloo ndlela, ucetyiswa kakhulu ukuba ukhethe enye enesiqinisekiso sokubuyisela imali kwaye uyivavanye ngeqonga lokurhweba ledemo elihloniphekileyo.
IiMpawu zoVavanyo zokuRhweba ngaphandle kokubeka imali eyiNgcipheko
Ukuba uthanda ingcamango yokungenzi iiyure zokuhlalutya kwezobugcisa kwaye ubukele iimarike - unokufaneleka kwiimpawu zokurhweba. Ukuthelekiswa neengcebiso zokuodola uya kufumana inkonzo yorhumo malunga nayo nayiphi na imarike.
Umzekelo, apha ku-Funda i-2 yoRhwebo, siyabonelela imiqondiso Forex, imiqondiso yesitokhwe kwaye nokuba simahla imiqondiso ye-crypto. Zonke izibonakaliso zenziwe liqela leengcali ezizinikeleyo ezisekwe kuhlalutyo lwemarike kwaye zithunyelwa kumawaka ethu amalungu ngeTelegram yemiyalezo efihliweyo yasimahla.
Funda imiqondiso emi-2 yoRhwebo ibandakanya yonke inkalo yeodolo yakho yorhwebo kwaye sikwabonelela ngesiqinisekiso sokubuyisela imali seentsuku ezingama-30 kuye nabani na ongonwabanga ngenkonzo yethu. Ungabeka ngokulula imiqondiso yethu yokurhweba kuvavanyo ngokubhalisela inkonzo yethu ngedemo elawulwayo yeqonga lokurhweba eToro. Faka ngokulula umqondiso ngamnye esikuthumela kwiakhawunti yakho yephepha kwaye uphinde uphonononge impumelelo yakho emva kweeveki ezi-2 okanye ezi-3!
Iingcebiso zeAkhawunti yeDemo
Kuba nabani na osaqalayo, sifake iingcebiso eziluncedo zeakhawunti yedemo apha ngezantsi.
Yiba Nenyani NgeNkunzi yokuRhweba
Eyona ndlela ilungileyo yokuba nenyani ngenkunzi yakho xa uthenga kwaye uthengisa ngeqonga lokurhweba ngedemo kukufunda ukubala umngcipheko wakho kunye nomvuzo kwisikhundla ngasinye osithathayo.
Masithi ukulungele ukubeka emngciphekweni $1 ngalinye $3 umvuzo
Lo ngumlinganiselo womngcipheko we-1:3
Ke, ukuba ubeka i-100 yeedola kwiimali zephepha kwi-EUR/USD - ulindele inzuzo ye-300 yeedola.
Esi sisicwangciso esiqhelekileyo esamkelweyo esisetyenziswa ngabarhwebi kunye nawo onke amanyathelo amava. Olunye ulungelelwaniso oluqhelekileyo lubandakanya 1:1.5, 1:2, kunye ne-1:4.
Lawula umngcipheko: Misa-Ilahleko kwaye Thatha-Inzuzo
Ukuba ulawula ngcono i-bankroll yakho ngezinto ezifana nezibheno zomvuzo womngcipheko kuwe - sebenzisa i-stop-loss kunye ne-odolo yokuthatha inzuzo kulo lonke urhwebo.
Jonga umzekelo ongezantsi wendlela onokuthi ukufake ngayo oku kwindawo yeakhawunti yedemo:
Uthengisa i-EUR/USD ngeqonga leakhawunti yedemo
Uhlalutyo lukhomba kwesi sibini se forex ukuba ngaphezulu ngoko ubeka i $1,000 thengisa umyalelo wokuyenza ibemfutshane
Kule, wongeza ilahleko yokuyeka ngexabiso 1% eliphezulu kunexabiso lemarike langoku lesibini esirhwebayo
Ngokunjalo, wongeza ukuthatha inzuzo nge-3% ezantsi ngaphezu EUR/USD ixabiso langoku
Ngaba endaweni yoko ukholelwa ukuba ixabiso le-EUR / USD liya kuphakama - ukulahlekelwa kwakho kokuyeka kuya kuba ngaphantsi kwexabiso lokungena kunye nenzuzo yokuthatha ngaphezu kwayo.
Njengoko ubona, unokudibanisa ngokulula isicwangciso somvuzo womngcipheko kuzo zonke iindawo - kuyo nayiphi na i-asethi. Kule meko, ukuba i-EUR / USD iwa ngexabiso nge-3% - iqonga lokurhweba ngedemo livala ngokuzenzekelayo urhwebo lwakho ukuvala kwiinzuzo zakho.
Ngaphandle koko, ukuba isibini siya kwelinye icala, awuyi kulahlekelwa ngaphezu kwe-1% - njengoko isikhundla sakho siya kuvalwa kwelo xabiso lexabiso.
Jonga Iimvakalelo Zakho
Akukho xesha lingcono lokujonga iimvakalelo zakho kunaxa usebenzisa indawo yokurhweba ngedemo ngemali yephepha. Oku kunokufezekiswa ngokulula ngokugcina idayari yokurhweba.
Jonga ngezantsi ezinye iingcebiso malunga nendlela yokugcina idayari yedemo yokurhweba ngeziphumo ezilungileyo:
Soloko uqala urhwebo ngokwenza inqaku lexesha kunye nomhla
Bhala phantsi isixhobo, amaxabiso omyalelo wakho wokungena kunye nayo nayiphi na ilahleko yokuyeka okanye ukongezwa kwengeniso
Ngokukhawuleza ukuba isikhundla sakho sivaliwe, mhlawumbi nguwe okanye ngokuzenzekelayo ngeqonga lokurhweba - bhala iziphumo zorhwebo ngokweenkcukacha
Ukuba wenza idayari yedijithali - unokufuna ukubandakanya iifoto-skrini ezibonisa urhwebo lwakho lwephepha
Bandakanya iingcinga kunye neemvakalelo zakho ngokubhekiselele kurhwebo-ithetha ukuba ulindele ntoni kwesi sikhundla kwaye kwenzeke ntoni
Ukuba isicwangciso asisebenzi, cacisa ukuba kutheni ucinga ukuba kunokuba njalo
Le yindlela enengqiqo kwaye eqinisekisiweyo yokuphonononga imisebenzi yakho yokurhweba ngedemo kunye nezicwangciso. Xa ujonga emva kamva ezantsi kumgca, uya kuba nakho ukubona ngokucacileyo ukuba zeziphi izicwangciso ezisebenzayo, kwaye zeziphi onokuthi uziphephe okanye uziqhelanise xa urhweba ngenkunzi yokwenyani.
Qalisa ngeQonga lokuRhweba ngeDemo: Amanyathelo ama-5 alula
Ukugubungela yonke into ukusuka kuphononongo olunzulu lwedemo yorhwebo, izibonelelo kunye neengcebiso ezizanyiweyo zavavanywa - mhlawumbi ukulungele ukuqalisa.
Nabani na ongazange avule i-akhawunti kwi-brokerage ye-intanethi, sifake isikhokelo sesinyathelo ngesinyathelo ngezantsi. Sisekele uhambo lwethu ekubhaliseni kwi-Capital.com
njengoko umthengisi uya kukunika i-100k yemali yephepha kwaye indawo isebenziseka kakhulu.
Inyathelo 1: Joyina i-Demo Trading Platform Capital.com
Ilayisenisi yamaqumrhu olawulo ahlukeneyo Capital.com
. Ngaloo ndlela, kuya kufuneka ukuba ufake ezinye iinkcukacha malunga nesazisi sakho. Oku kuquka iziseko ezifana negama lakho kunye nedilesi yekhaya.
Xa uhlolisise ukuba yonke into ichanekile, unokufunda imigaqo nemiqathango kwaye ucinezele u-'Dala i-Akhawunti'.
Inyathelo 2: Qinisekisa i-ID yakho
Kweli nqanaba, Capital.com
izakukuthumela i-imeyile ekwamkelela kwiqonga lokurhweba ngedemo. Oku kuxa uya kumenywa ukuba ugcwalise iakhawunti yakho ngokufaka ikopi ecacileyo ye-ID yesithombe sakho.
Uninzi lwabarhwebi basebenzisa incwadana yokundwendwela. Ukuqinisekisa idilesi yakho, ungathumela ikopi yebhili esetyenziswayo yakutshanje okanye isitatimenti sebhanki. Oku kufuneka kungqinelane nedilesi oyinikileyo kwaye kubandakanye nefomu yomhla kwiinyanga ezi-6.
Phawula: Unako ukushiya ukukhutshwa kwamaxwebhu de ube ukulungele ukurhweba kwi-akhawunti yemali yokwenyani ukuba unqwenela.
Inyathelo 3: Khetha iAkhawunti yeDemo ebonakalayo
Nje ukuba ugqibe ukuseta iakhawunti yakho, yiya kwiphepha eliphambili ledeshibhodi kwaye uya kubona igama lakho lomsebenzisi kwicala lasekhohlo. Ngaphantsi koku kukho ithebhu ethi 'Inyani', cofa oku kwaye ungatshintshela kwi-'Akhawunti yeVirtual' ngokulula.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, eli qonga lokurhweba ngedemo liya kukunika i-100,000 yeedola kwiimali zephepha onokurhweba ngazo. Ukuqalisa cofa u-'Yiya kwi-Virtual Portfolio' - njengoko ubona ngasentla.
Inyathelo lesi-4: Fumana iMarike yokuRhweba
Uphantse walapho. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile ngoku kukukhangela imakethi yokurhweba ngeakhawunti yakho entsha yokurhweba.
Unokucofa iqhosha elithi 'Iintengiso zoRhwebo' kwicala lasekhohlo le-akhawunti yakho ukuze ukhuthazeke - okanye usebenzise ibha yokukhangela kwiklasi ethile ye-asethi.
Inyathelo lesi-5: Faka uMyalelo wokuRhweba ngeDemo
Xa ugqibile ukuba yeyiphi imakethi ofuna ukuyirhweba, ungacofa u-'Rhweba' ukuzisa ibhokisi yoku-odola - njengalapha ngezantsi.
Apha ungafaka ilahleko yokuyeka kunye nokuthatha inzuzo kwaye usebenzise i-leverage - kunye nokwenza isigqibo phakathi kwexesha elide (ukuthenga) okanye elifutshane (Thengisa). Cofa u-'Vula uRhwebo' xa wanelisekile ukuba lonke ulwazi luchanekile.
Xa uziva ukulungele ukuya kwiakhawunti yokwenyani nqakraza ku-'Virtual' ezantsi kwicala lasekhohlo kwaye emva koko ucofe 'Okwenyani'. Oku kuya kuzisa ibhokisi yokuqinisekisa ukuqinisekisa ukuba ulungele ukutshintshela kwindawo yokuthengisa yangempela, usebenzisa inkunzi yangempela.
IiPlatifomu zokuRhweba ngeDemo ngo-2021: Ukuqukumbela
Iqonga ngalinye ledemo yokurhweba esithe saliphonononga namhlanje linika abarhwebi abanamava kunye nabarhwebi abatsha ithuba lokungena kwaye baphume kwiimarike ngendlela engenamngcipheko ngokupheleleyo. Ingaba ufuna ukusebenzisa idemo ukuzama inkonzo yeempawu zokurhweba, okanye isicwangciso esitsha - uya kuthenga kwaye uthengise usebenzisa iimali zephepha.
Abafundi beKinesthetic baya kuxabisa izifundo ezibalulekileyo ezinokubonelelwa ngee-akhawunti zedemo. Oku kungenxa yokuba unokufunda ngokwenza - kwiimeko zemarike yehlabathi yokwenyani ngaphandle kokubeka umngcipheko weesenti kwiimpazamo zakho.
Ukuba awukafiki isigqibo malunga neqonga lokurhweba ngedemo. Capital.com
uphawula zonke iibhokisi umthengisi ohloniphekileyo kufuneka. I-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB ilawula lo mthengisi, kukho amawaka ee-asethi ezithengiswayo, iifizi zekomishini zero kwii-akhawunti zangempela kwaye uya kufumana i-100k yeemali zeedemo!
Leliphi elona qonga lokurhweba ngedemo?
Emva kokuphonononga kakhulu, sifumene elona qonga lilungileyo lokurhweba ngedemo ibe yi-eToro. Umrhwebi uhlonitshwa kakuhle ngabasemagunyeni kunye nabarhwebi ngokufanayo kwaye ulawulwa yimimandla emininzi. Indawo yedemo iza ilayishwe nge-100,000 yeedola kwimali yephepha ukuziqhelanisa kunye nokwenza amaqhinga kwaye unokufikelela kumawaka e-asethi kwiwebhusayithi ekulula ukuyisebenzisa yabarhwebi. Xa ufudukela kwi-akhawunti yokwenyani awuyi kuhlawula nayiphi na ikhomishini konke konke.
Ngaba urhwebo lwedemo luxabisa ixesha?
Ewe, urhwebo lwedemo luxabisa ixesha. Ayisiyiyo kuphela into okwaziyo ukufunda ukurhweba ngaphandle kokubeka umngcipheko kwimali yakho yokwenyani, kodwa ungaziqhelanisa namaqhinga kunye nokuvavanya iimarike ezahlukeneyo ezingenabungozi. I-eToro iya kukunika i-$ 100k yemali ebonakalayo, ukufikelela kwii-asethi ezininzi kunye nezixhobo, kwaye ifanelekile ngenkonzo ye-Learn 2 Trade signal. Ngaphaya koko, i-broker ilawulwa kakhulu kukhuseleko lwakho.
Ngaba iiakhawunti zedemo zisemthethweni?
Impendulo ayicacanga. Kukho amaqonga okurhweba ngedemo anikezela ngeeakhawunti ezinokuthi zithathelwe ingqalelo - okanye zenziwe ngendlela yokwenza ukuba ukholelwe ukuba iimeko zabo zilungile ngakumbi kunokuba zinjalo. Eyona ndlela yokuthintela oku kukubhalisa kuphela kunye nomthengisi ohlonitshwayo nonelayisensi ukurhweba ngemo yedemo. I-eToro, i-EightCap, i-AvaTrade, i-Capital.com, kunye ne-EuropeFX zonke zilawulwa kakhulu ngamaqonga eeakhawunti zedemo.
Isebenza njani iakhawunti yedemo yokurhweba?
Xa ubhalisa ngeqonga lokurhweba ngedemo uya kunikwa iakhawunti ebonakalayo. Oku kuya kulayishwa kwangaphambili ngemali yephepha, kodwa ukuba ufumana kangakanani kuxhomekeke kwi-brokerage oyikhethayo. Idemo ihlala iyilelwe ukudala imeko-bume ekufutshane neemeko zehlabathi lokwenyani kangangoko. Oku kubandakanya amaxabiso emarike kunye nokuguquguquka. Uya kukwazi ukubeka iiodolo, uziqhelanise nohlalutyo lobugcisa, kwaye uzame imiqondiso yokurhweba - konke ngaphandle kokubeka umngcipheko wakho oyinkunzi. I-eToro inika bonke abathengi iakhawunti yokwenyani kunye neakhawunti yokurhweba ene-100k yeedola kwiimali zephepha.
Ngaba ndingasebenzisa iakhawunti yedemo ngeMT4 iyodwa?
Hayi, ukurhweba ngeMT4 (okanye MT5) kufuneka uqale ubhalise kunye nomthengisi ohambelana neqonga lakho lesithathu elikhethiweyo. Ngokukodwa i-EightCap, i-AvaTrade, i-Capital.com kunye ne-EuropeFX zonke zibambisene neMT4. Ngaloo ndlela, ungabhalisa nayo nayiphi na enye yezi ntengiso zilawulwayo ukuze ufikelele kwiiakhawunti zedemo yasimahla kunye nenani lezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha.